मिलान कुन्देराको 'ठट्टा' ~ जोगी जिन्दगी
5:52 AM किताब, समीक्षक, सर्कल, साहित्यकार No comments
-- अभय श्रेष्ठ
तपाईंले असाध्यै प्रेम गरेकी केटी १५ वर्षपछि एक्कासि भेटिई भने कस्तो होला? त्यो पनि सैलुनमा तपाईंकै सेवा गरिरहेको स्थितिमा? मिलान कुन्देराको उपन्यास 'जोक' यस्तै पे्रममय हार्दिक वर्णनबाट अगाडि बढ्छ। यो, त्यस्तो मनमोहक उपन्यास हो जुन पढ्दा नयाँ प्रेमिकासँग लामो सहयात्रा गर्न पाएझैँ लाग्छ। आरोन असरले अंग्रेजी अनुवाद गरेको ३१७ पृष्ठको उपन्यास जति पढ्यो त्यति रहस्य र हार्दिकताको पोयो फुक्दै जान्छ। (उपन्यासको पहिलो भाग पढिसकेपछि म कति डुबेँ भने अगाडि अक्सफोर्ड एड्भान्स्ड लर्नर्स डिक्सनरी राखेर लगातार १६ घन्टा पढिरहेँ)।
लुसीको उदास कथा
१५ वर्षपछि लुडभिक जान प्रागबाट कुनै कार्यक्रमका लागि मातृसहर मोराभिया आउँछ। ऊ दाह्री काट्न नाउकहाँ जान्छ। एउटी केटी उसको दाह्री काट्न थाल्छे। केटीलाई ऐनाबाट देख्दा झसंग हुन्छ। के यो उसकै प्रेमिका हो? त्यसो त त्यसको अनुहारमा पहिलेजस्तो झरिलो बहार थिएन। केही मोटी भएकी थिई र अनुहार फुस्रो भएको थियो। तर, त्यसको सातो गएजस्तो लाग्ने जुन अनुहार थियो, त्यो पनि एउटा प्रमाण थियो। त्यसले ऊसँग फेरि आँखा जुधाइन। सबै कुराबाट उदास भएर टोलाउन थाली। पैसा लिँदा पनि ऊतिर हेरिन जसका कारण लुडभिकले बोल्ने मौका पाएन। साथी कोस्तकालाई सोध्यो, 'मेरो दाह्री काट्ने केटीको नाम लुसी सेबेत्का हो?'
'त्यो यस सहरमा अर्कै नामले चिनिन्छे,' कोस्तकाले भन्यो, 'तर उसको खास नाम त्यही हो। कसरी चिन्यौ?'
अस्ट्रभा सहरमा भेटिएकी लुसी कति दुःखी, उदास तर प्यारी थिई! ऊ एक्कासि त्यहाँबाट गायब भएकी थिई। त्यसबेला रुसमा अत्यन्तै प्रसिद्ध फिल्म 'कोर्ट अफ अनर' हेर्ने क्रममा सिनेमा हलमा भेटिएकी थिई। लुडभिक त्यससँग एकतर्फी प्रेम गर्न थाल्यो। सानैमा बाबु गुमाएको लुडभिक धनी व्यापारीकी पत्नी बनेकी फुपुका कारण बुर्जुवाविरोधी बन्यो। ऊ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्यो। आफ्नी सहपाठी मार्केटालाई पोस्टकार्डमा अनेक दर्शन छाँटेर दिन थाल्यो। एकपल्ट उसले लेखेको थियो, 'आदर्श जनताको अफिम हो। स्वस्थ वातावरण आफै दुर्गन्धित छ। ट्रात्स्की जिन्दावाद!' मार्क्सले त धर्मलाई अफिम भनेका थिए। के लुडभिकको अभिव्यक्ति पार्टीविरुद्ध छैन? किन छैन? विचरा उसले त केटीलाई आकर्षित गर्न ठट्टास्वरूप यस्तो लेखेको थियो। पार्टीबाट मात्र होइन, ऊ विश्वविद्यालयबाटै अपमानपूर्वक निकालियो। उसलाई सुधार्न सेनामा भर्ती गरियो र अस्ट्रभाको खानीमा कडा काम लगाइयो। आमा मर्दा पनि घर जान पाएन। यसै क्रममा मरुभूमिमा मरुद्यानजस्तै भेटिएकी थिई लुसी। कुनै कारखानामा काम गर्ने त्यो केटी गरिब, दुःखी, मायालाग्दी, राम्री र इमानदार थिई।
सेनाको कमान्डर असाध्यै कडा थियो। ऊ लुडभिकलाई बिनादोष बारम्बार सजाय दिन्थ्यो। दुई महिनापछि बल्ल छुट्टी पाएको लुडभिकले लुसीलाई उसकै कोठामा भेट्यो। कोठा निकै सजाइएको थियो। उसलाई लाग्यो, लुसी भव्य समारोहबीच आफ्नो कुमारित्वलाई बाईबाई गर्न चाहन्छे। उसले लुसीलाई खाटतिर तान्यो। अचम्म, लुसी आफूलाई जोगाउन भिडन्त गर्न थाली! समर्पणका बेला केटीले गर्ने त्यो, सामान्य नाटकमात्र थिएन, साँच्चिकै भिडन्त थियो। उसले फकायो, केही सफल पनि भयो। लुसी फेरि संघर्षमा उत्रिई। तेस्रो प्रयासमा शान्त भई। 'मैले उसको स्कर्ट फर्काइदिएँ र घुँडाभन्दा आठ वा नौ इन्च माथि किस पनि गरेँ', लुडभिक भन्छ, 'त्यसपछि उसले एक लाइन पनि माथि उक्लिन दिइनँ।' केटीले अर्को कुनै दिनको भाका राखी। लुडभिकले एउटा मजदुरको घरमा व्यवस्था मिलायो। नभन्दै लुसी आई । लुडभिक भागेर त्यहाँ पुग्यो। केटी थरथर काँप्न थाली। लुडभिक यसपालि पनि सफल भएन। केटीले रुँदै भनी, 'तिमी मलाई माया गर्दैनौ, मात्र भोग्न चाहन्छौ।' वाक्क भएर लुडभिकले उसलाई बाहिर जाने अनुमति दियो।
केही दिनपछि उसलाई आफ्नो गल्ती महसुस भयो र लुसीलाई भेट्न गयो। लुसी सहर छाडेर हिँडिसकेकी थिई। कता गई? कसैलाई थाहा भएन।
पश्चिमी बोहेमियाको एउटा फार्म हाउसमा अचम्मको कथा सुनियो। एकपल्ट युवकहरूले परालको कुन्युबाट अन्दाजी २० वर्षे युवती निस्केर जंगलतिर दौडँदै गएकी देखे। हेर्दाहेर्दै त्यो अलप भई। अर्कोपल्ट एक महिलासँग त्यसले रोटी मागी। महिलाले सोधिन्, 'कहाँ जाँदैछ्यौ नानी?' केटीले भनी, 'मेरो बाटो लामो छ। मैले आफूसँग भएको सबै पैसा हराएँ।' एउटा गोठालो माथि पहाडमा रोटी, नौनी र दूधको जग रुखमुनि राखेर भेडाको बथान धपाउन गयो, फर्कंदा ती सब गायब थिए। केटाकेटीका लागि त्यो अब किंवदन्तीकी नायिका भई। उनीहरूले त्यसको नामै राखिदिए, भ्यागाबन्डेला। घरबारविहीन केटी। उनीहरू पोलेको आलु र अरु खानेकुरा एक भाग त्यसका लागि छुट्याउँथे र हरेक पल्ट बेग्लाबेग्लै ठाउँमा राख्थे। भोलिपल्ट सधैँ त्यो खानेकुरा त्यहाँ हुँदैनथ्यो।
यो जादुमय कथा धेरै लम्बिन पाएन। फार्म हाउसका निर्देशक र जिल्ला राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षले निरीक्षणका क्रममा एक दिन एउटा कोठामा पुरानो ब्याग, त्यसभित्र थोत्रा केही कपडा र चिठी भेटे। चिठी कसको नाममा थिए? ढिलोसम्म उनीहरू चियो गरेर बसे। केटी फेला परी। हरे त्यो दुःखी त हाम्रै प्यारी लुसी पो थिई! फार्महाउसको प्रबन्धक बनेको धर्मभीरु कोस्तकालाई उसले सबै बताइ। उसको घर चेबमा थियो। बाबु सानैमा बिते। आमाले अर्को बिहे गरिन्। सौतेलो बाबु र आमा उसलाई सधैँ कुट्न थाले। ऊ घर छाडेर केही आवाराको समूहमा पुगी। १६ वर्ष पुगी। केटाहरू २० देखि १६ सम्मका थिए। एक दिन रक्सी खाएर समूहको नाइकेले उसलाई लुगा फुकाल्न आदेश दियो। ऊ रुन थाली। ऊ त यिनीहरूलाई नै आफ्नो संरक्षक ठान्थी। त्यसले बलात्कार गर्योो। त्यसपछि उमेरअनुसार पालैपालो तिनीहरू ऊमाथि खनिए। कान्छोको पालामा प्रतिकार गरी। त्यसले उसलाई मुखमा जथाभावी मुक्का हान्यो र अझ बढी क्रूरतापूर्वक बलात्कार गर्यो । यो क्रम नियमित चल्न थाल्यो। यसै क्रममा चोरीका सामानसहित तिनीहरू प्रहरी फन्दामा परे। केटाहरू जेल परे। केटीलाई सुधारालय राखियो। ऊ इमानदार थिई, यसकारण चाँडै नै मुक्त भई। इमानदारी पनि कस्तो अभिशाप! अब ऊ कहाँ जाओस्? त्यसपछि ऊ ओस्ट्रभा पुगी र कारखानामा काम गर्न थाली।
ऊप्रति एउटा सिपाही आकर्षित भयो जसले उसलाई बलात्कारको प्रयास गरेको थियो। त्यसो त ऊ पनि त्योसँग एक्लै कोठामा ढोका बन्द गरेर बसेकी थिई नि! के ऊ त्यसलाई प्रेम गर्थी? अँहँ, आफ्नो जीवनको शून्यताबाट वाक्क भएरमात्र उसले त्यसको संगत स्वीकारेकी थिई।
लुसीबारे फार्म हाउसमा धेरै प्रश्न उठ्छन्। सुधारालयमा, ओस्ट्रभामा कारखाना र डर्मिटरीमा पनि उसको रेकर्ड राम्रो थियो। ओस्ट्रभामा केबल एकपल्ट चिहानबाट फूल चोर्दै गर्दा समातिएकी थिई। फार्म हाउस उसलाई सुरक्षामात्र दिँदैन, काम र माम पनि दिन्छ। कारखानामा सबैजना ऊप्रति असल व्यवहार गर्छन्। खालि कहिलेकाहीँ जिस्कँदा उसको विगत कोट्याइदिन्छन्। लुसी आफूलाई दोषी महसुस गर्र्छे।
कुनै दिन उसले आवारा समूहलाई विश्वास गरेकी थिई। ती अत्यन्तै क्रूर साबित भए। तिनीहरूको पनि साथ छाडेपछि कहाँ जाने? यस कारण तिनीहरूका लागि 'स्कर्ट खोलिदिएकी' थिई। पछि केटाहरूलाई बानी लाग्यो। तिनीहरू उसलाई निलडाम हुनेगरी कुट्न पनि थाले। प्रहरीसामु उल्टै उसलाई चेबकै कलंक भन्न थाले। यस कारण उसलाई सुधारालय पठाइएको थियो। व्यवस्थाद्वारा सताइएको दुःखी लुडभिक पनि तिनै चोरजस्तै क्रूर थियो। हरेकपल्ट ऊ लुसीको 'कुमारी बैँस' भंग गर्न चाहन्थ्यो। दुःखी मनको शून्यताबाट थाकेर संगत स्वीकार्नु बेग्लै कुरा हो, नत्र लुसी त्यसलाई पनि प्रेम गर्दिनथी।
पादरीको छोरा कोस्तका प्रागको एउटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक थियो। ईश्वरमाथि उसको आस्था थियो। आन्दोलनका क्रममा उसले कम्युनिस्ट विद्यार्थीलाई साथ दिएको थियो। कम्युनिस्ट सत्तामा आएपछि उसको आस्थाबारे प्रश्न उठाउन थालियो। लुडभिक उसको पक्षमा उभियो। कोस्तकाले त्यहाँ राजीनामा गरेर पश्चिमी बोहेमियाको फार्म हाउसमा प्रबन्धकका रूपमा काम थाल्यो। लुसीलाई उसले ठूलो सहयोग गर्योा। नैतिक बल दिएर उसैले जीवनप्रति आशा जगाइदियो। आइमाईहरू सदैव प्रेम चाहन्छन्। त्यसको बदला उनीहरू कैयौँ गुणा बढी पे्रम दिन्छन्। अनन्त दुःख र त्रास भोगेकी एउटी केटीलाई यस्तो आत्मीयता पाएपछि के चाहियो? ऊ कोस्तकालाई प्रेम गर्न थाली। उसैसँग समर्पित पनि भई। कोस्तकाका एक छोरा र ऊभन्दा छ वर्ष जेठी स्वास्नी प्रागमा थिए। यसैबीच सरकारले फार्म हाउसको डाइरेक्टरमाथि अनेक अभियोग लगायो, जसको प्रमुख तारो थियो धर्मभीरु कोस्तका। निर्देशकले उसको बचाउ गर्योो। तर, यी सब सहन कोस्तका तयार भएन। राजीनामा गरेर ऊ मोराभिया पुग्यो जहाँ लुडभिकको सहयोगले एउटा अस्पतालमा काम गर्न थाल्यो।
लुसीले बिहे गरी। लोग्ने सहरमा कुनै व्यवसाय गर्न चाहन्थ्यो। यस कारण उसले फार्म हाउसको काम छाड्नुपर्योो। उनीहरू मोराभिया आए जहाँ लुसीले हेयरड्रेसिङको काम थाली। लोग्ने दुष्ट पर्योल। लुसीमाथि त्यो अत्यन्तै क्रूर व्यवहार गर्थ्यो। अभागी लुसीले कहिल्यै सुख पाइन। तर, अब ऊ कोस्तकालाई आफ्नो दुःख सुनाउँदिनथी किनभने कोस्तका दुःखी भएको ऊ हेर्न सक्दिनथी। साँच्ची ऊ किन मोराभिया आएकी थिई? बिहे अरुसँगै गरेकी थिई, तथापि ऊ कोस्तकालाई नियमित सुन्न, भेट्न र हेर्न चाहन्थी। कठै लुसीको प्रेम!
लुडभिक, हेलेना र जेरोस्लाभ
सेनामा सजाय सकिएपछि लुडभिकले विज्ञानमा डिप्लोमा गर्योक र अनुसन्धानमूलक संस्थामा वैज्ञानिकको राम्रो जागिर भेट्यो। लुडभिकको सहपाठी पाभेल जेमानिककी स्वास्नी हेलेना प्राग रेडियोमा रिपोर्टर थिई। लुडभिकसँग उसको हिमचिम बढ्यो। मोराभियाको एउटा समारोहमा रिपोर्टिङका लागि पुगेकी हेलेनाको शरीरसँग लुडभिकले खुब खेल्यो। पाभेलले हेलेनालाई छाडिसकेको थियो। उसले भर्खरकी केटीलाई कान्छी बनाएको थियो। लुडभिकसँगको सम्बन्धले हेलेना खुसी भई। तर, लुडभिकले यो सबै बिर्सिदिन आग्रह गरेपछि ऊ ज्यादै निराश भई। उसले बिष पिई। खबर पाउनेबित्तिकै लुडभिक हेलेनाकहाँ पुग्यो। हेलेनाले बिष भनेर पिएको अर्कै औषधि परेछ। उसले लुडभिकलाई घृणा गरी। सायद अब ऊ अनुहारभरि चायाँ परेको आफ्नै प्राविधिक सहयोगी जिन्द्रासँग समर्पित हुन्छे, जो ऊप्रति एकतर्फी आकर्षित भएको थियो।
जेरोस्लाभ मोराभियामा स्थानीय संगीत टोलीको नाइके थियो जसमा कुनै दिन लुडभिक पनि सदस्य थियो। ऊ त्यहाँको राजा चुनिएको थियो। हंगेरीका राजाले त्यो ठाउँ छाडेपछि जिल्ला समितिको सिफारिसमा मोराभियामा नयाँ राजाको राज्याभिषेक गर्ने चलन थियो। लुडभिकको जिन्दगीमा एक्कासि आँधीबेरी आयो जसले पछि उसलाई अराजकतावादी बनाइदियो। वर्षौंपछि मातृसहर आएको लुडभिकले आफूलाई नदेखेझैँ गर्दा जेरोस्लाभ निकै दुःखी भएको थियो। जेरोस्लाभले नोकर्नी केटी भ्लास्तासँग बिहे गरेको थियो। तिनीहरूका छोरा भ्लादिमिरलाई पछि राजा चुनियो। राज्याभिषेक समारोह भव्य भयो। यही कार्यक्रमको रिपोर्टिङका लागि हेलेना मोराभिया आएकी थिई जहाँ ऊ लुडभिकसँग फसी। भ्लादिमिरले राजा हुन अस्वीकार गरेको रहेछ। ऊ त आफ्नै साथीको मोटरसाइकलमा बसेर कतै भागिसकेको रहेछ। राजा सजाउने बेला भ्लास्ताले जेरोस्लाभलाई कोठाभित्र छिर्न दिएकी थिइन। आफ्नै छोरा र स्वास्नीले आफूलाई धोका दिएकोमा ऊ अत्यन्तै दुःखी भयो। स्थानीय होटलमा बेलुकी उसको टोलीले संगीत दिनु थियो। लुडभिकले पनि उसलाई साथ दियो। संगीत दिँदादिँदै जेरोस्लाभ ढल्यो। उसलाई हृदयाघात भएको थियो। मानिसहरू रक्सीले मातेर संगीतको तालमा नाचिरहेका थिए, तर त्यही संगीत टोलीको नाइके हृदयाघात भएर मृत्युको मुखमा पुगेको घटनाबारे तिनीहरूलाई चासो थिएन।
कुन्देराको लेखनमा त्यो शक्ति छ, जसले हरेक वर्गका पाठकको मर्मलाई छुन्छ। 'जोक'का सात भागमा प्रत्येक पात्र आआफ्ना दृष्टिबाट कथा भन्दै जान्छन्। पहिलो भागमा लुडभिक, दोस्रोमा हेलेना, तेस्रोमा लुडभिक, चौथोमा जेरोस्लाभ, पाँचौँमा लुडभिक, छैठौँमा कोस्तका, सातौँमा लुडभिक, जेरोस्लाभ, हेलेनाको माध्यमबाट आत्मगतरूपमा कथा अघि बढ्दै जान्छ। खट्कने कुरा के छ भने उपन्यासकी सबैभन्दा शक्तिशाली चरित्र लुसीको माध्यमबाट भने कथा अगाडि बढ्दैन। उसबारे सारा कथा लुडभिक र कोस्तकाले मात्र भन्छन्। हेलेनाको सट्टा लुसीलाई उभ्याउनु जरुरी थियो।
सन् १९२९ मा जन्मेका कुन्देरा किशोरवयमै चेक कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भए। पार्टीविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा १९५० मा अर्का प्रसिद्ध स्रष्टा जान ट्रेफुल्कासँगै निकालिए। ट्रेफुल्काले ह्यापिनेस रेन्ड अन देम (१९६२) तथा कुन्देराले द जोक (१९६७) मा यही घटनालाई मूल विषय बनाए। सन् १९५६ मा कुन्देराले फेरि पार्टीमा प्रवेश पाए। सन् १९७० मा फेरि निकालिए। सन् १९७५ देखि उनी पेरिसमा छन्। विडम्बना, समाजवादको पतनसँगै चेकोस्लोभाकिया दुई टुक्रा भएको छ। धन्न रुसजस्तो १५ टुक्रा भएन।
समाजवाद र महिलाप्रति असहिष्णुताका कारण कुन्देराको लेखन सधैँ विवादास्पद रह्यो। उनका धेरैजसो आख्यानमा चेकोस्लोभाकियाको तत्कालीन समाजवादमा व्याप्त 'जडता'को खिल्ली उडाइएको छ। त्यसबाट प्रभावित जीवनका यावत तरंग उनका सिर्जनामा छताछुल्ल छन्। उनका उपन्यासलाई कम्युनिस्टविरोधी भन्दा फरक पर्दैन। विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तथापि उनको लेखनको 'इपिक्यालिटी' अनुपम छ। उनको लेखनमा बेजोड वर्णन क्षमता, मनमोहक भाषाशैली, तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक मार र हास्यरस छ। त्यसकै लागि पनि उनलाई सबै वर्गका पाठक र लेखकले पढ्नु जरुरी छ। समीक्षकहरूले उनलाई संसारकै सबैभन्दा रमाइला र सबैभन्दा उदास लेखक भनेका छन्। धेरैपल्ट मनोनित भए पनि अन्ततः पन्छाइएका उनी आउँदा कुनै पनि वर्ष नोबेल विजेता हुन सक्छन्।